मातातीर्थको जग्गा लुटाइएकै हो त ? - Baikalpikkhabar
मातातीर्थको जग्गा लुटाइएकै हो त ?
नेपाल ट्रस्टको धेरैजसो सम्पत्ति लुटकै रूपमा लिज र भाडामा दिइएको छ  । यही परिस्थितिको सेरोफेरोमा मातातीर्थ क्षेत्रको १७३ रोपनी जग्गा पनि डा। बाबुराम भट्टराईको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विभिन्न मोहीका नाममा दर्ता गरिदिने निर्णय गर्‍यो  ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानुनसरह लागू हुन्छ । २०२६ असोज १३ गतेको राजपत्रको सूचनाले के बताउँछ भने, नेपालको संविधान–२०१९ को धारा २०(२) अनुसार तत्कालीन सम्प्रभुतासम्पन्न कानुनको स्रोत रहेका राजा श्री ५ महेन्द्रबाट एउटै देशमा भूमि सम्बन्धमा भिन्नभिन्न व्यवस्था लागू गर्न नहुने भएकाले राजपरिवारका फर्मायसी बिर्ताहरूको हक परित्याग गरी त्यस्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने उद्घोष गरियो । त्यस्तो जग्गा जोत्ने मोहीकै नाममा रैकरमा दर्ता गरिदिनू भनी आर्थिक वर्ष २०२६र२७ देखि हक परित्यागको अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरियो । रैकरमा परिणत हुने फर्मायसी बिर्ताहरूको कुत मोहीले राजदरबारमा नतिरी अन्यसरह सर्वसञ्चित कोष अर्थात् राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्नू भन्ने राजाबाट हुकुम भयो ।
मङ्गलबार, २७ फागुन, २०७६, बिहानको ०९:३० बजे